ပထမ အဆင့် 1. အသီး​၏အောက်ပိုင်းအခြမ်းမှ အစေ့များကိုယူပါ။ ဒုတိယအဆင့် 2. အစေ့များကိုရေစိမ်၍ ရေပေါ် ပေါ်လာသောအစေ့များကိုဖယ်ပါ။ ရေပေါ် ပေါ်သော အစေ့များသည် ကျန်းမာစွာသီးနိုင်ဖို့အခွင်းရေးနည်းပါသည်။
3. ကျန်သောအစေ့များကို ရေစစ်ပါ။ သတိ: နေရောင်ဖြင့်အ​ခြောက်မခံရပါ။ နေရောင်ဖြင့်အခြောက်ခံလျှင် အားနည်းသောပျိုးပင်များဖြစ်တတ်ပါသည်။ 4. ရေစစ်ထားသော အစေ့များကို အိုး၌တန်းစိုက်လျင်ပိုကျန်းမာသောအပင်ဖြစ်ပါမည်။
5. ထိုနောက်အပင်ကို ရေလောင်းပေးပါ၊ နေရောင်ခြည်အောက်ထားပါ။ တတိယအဆင့် 6. ဒုတိယအဆင့်တွင် စိုက်က်ထားသောအပင် အရွယ်ရောက်လာလျှင် ပင်မ အမြစ်ကိုညှပ်ပါ။
7. ညှပ်ပြီးသားအပင်ကို ပလက်စတစ် အိတ်ထဲတွင် တစ်ပတ် အရင်သိမ်းထားပြီး ရေနိုင်နိုင်လောင်းပေးပါ။ ၎င်းအဆင့်များလိုက်နာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်္ဘောအမ ပင်ရရှိပါပြီ။
နေရာမရွေး အချိန်မရွှေး သင်္ဘောသီးတွေကို အသားထူထူ ၊အစေ့နဲနဲ ပြွတ်ခဲနေအောင် သီးစေသောနည်း
အ စေ့ ကို တစ် ရက် နေ လှန်း ပြီး ပျိုး ပင် ဖောက် ပါ။ အဲ့ ဒီ ပျိုး ပင် လေး(၇-ရက်) ပြည့် တဲ့ အ ခါ ခွဲ စိုက် မယ့် နေ ရာကို….(၁) တွင်း ဝ တစ် ပေ၊ အ နက် တစ် ပေ ခွဲ တူး ပြီး တွင်း ထဲ ကို သစ် ရွက် ခြောက် ဖြစ် စေ…ကောက် ရိုး ခြောက် ဖြစ်စေ ထည့် ပြီး မီး ရှို့ ပါ။ နှစ် ကြိမ် ပြု လုပ် ရန် လို အပ် ပါ သည်။ ပြာ ကျ ပြီး တာ နဲ့ တွင်း ထဲ ကို ရေ အ ပြည့် လောင်းပြီး တစ် ည ထား ပါ။
(၃) လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ စွန့်ပစ်စုပုံထားကြတဲ့နှပ်ပြီးသားအချိုခြောက်အဖတ်တွေကိုယူနွားချေးခြောက်နှင့်ဆတူ ရောသမမွှေပြီးတစ်နေလှန်းပါ။ ပြီးလျှင်တွင်းထဲသို့ တစ်ထွာခန့်ထပ်ဖြည့်ပါ။ ၎င်း အပေါ်မှထပ်မံ၍ မြေဆွေးအပြည့်ထည့်လိုက်ပြီးပျိုးပင်ကိုစိုက်ပျိုးပါ။
(၄) ပျိုးပင်(၂-ပေ)ခန့်ကြီးလာတဲ့အခါအပင်ရင်းပတ်လည်ကို မီးဖိုကရတဲ့ပြာမှုန့်၊ မီးသွေးမှုန့်တွေကို အုံထားပေးပါ။နံနက်စောစောနှင့် နေဝင်ပြီးချိန်၌တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် ရေမှန်မှန်လောင်းရပါမယ်။
မှတ်ချက် အဝါရောင်အသားရှိတဲ့သင်္ဘောသီးကိုအနီရောင်ဖြစ်စေချင်ရင်တော့ အောက်ခြေမှာဖြူးထားတဲ့ထုံးမှုန့်ကိုမီးသွေးအမှုန့်နဲ့ဆတူရောစပ်ပြီးစိုက်ပါ။
CRD_EFR Agro Venture Co., Ltd.
စီးပှားဖွဈပဲ စိုကျစိုကျ အိမျစားဖို့ပဲ စိုကျစိုကျ “သင်ျဘောပငျ စိုကျတဲ့အခါ အမ ပငျပဲ ဖွဈလာစမေယျ့ နညျးလမျးကောငျးလေး”
ပထမ အဆငျ့ 1. အသီး၏အောကျပိုငျးအခွမျးမှ အစမြေ့ားကိုယူပါ။ ဒုတိယအဆငျ့ 2. အစမြေ့ားကိုရစေိမျ၍ ရပေျေါ ပျေါလာသောအစမြေ့ားကိုဖယျပါ။ ရပေျေါ ပျေါသော အစမြေ့ားသညျ ကနျြးမာစှာသီးနိုငျဖို့အခှငျးရေးနညျးပါသညျ။
3. ကနျြသောအစမြေ့ားကို ရစေဈပါ။ သတိ: နရေောငျဖွငျ့အခွောကျမခံရပါ။ နရေောငျဖွငျ့အခွောကျခံလြှငျ အားနညျးသောပြိုးပငျမြားဖွဈတတျပါသညျ။ 4. ရစေဈထားသော အစမြေ့ားကို အိုး၌တနျးစိုကျလငျြပိုကနျြးမာသောအပငျဖွဈပါမညျ။
5. ထိုနောကျအပငျကို ရလေောငျးပေးပါ၊ နရေောငျခွညျအောကျထားပါ။ တတိယအဆငျ့ 6. ဒုတိယအဆငျ့တှငျ စိုကျကျထားသောအပငျ အရှယျရောကျလာလြှငျ ပငျမ အမွဈကိုညှပျပါ။
7. ညှပျပွီးသားအပငျကို ပလကျစတဈ အိတျထဲတှငျ တဈပတျ အရငျသိမျးထားပွီး ရနေိုငျနိုငျလောငျးပေးပါ။ ၎င်းငျးအဆငျ့မြားလိုကျနာပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ သင်ျဘောအမ ပငျရရှိပါပွီ။
နရောမရှေး အခြိနျမရှေး သင်ျဘောသီးတှကေို အသားထူထူ ၊အစနေဲ့နဲ ပွှတျခဲနအေောငျ သီးစသေောနညျး
အ စေ့ ကို တဈ ရကျ နေ လှနျး ပွီး ပြိုး ပငျ ဖောကျ ပါ။ အဲ့ ဒီ ပြိုး ပငျ လေး(၇-ရကျ) ပွညျ့ တဲ့ အ ခါ ခှဲ စိုကျ မယျ့ နေ ရာကို….(၁) တှငျး ဝ တဈ ပေ၊ အ နကျ တဈ ပေ ခှဲ တူး ပွီး တှငျး ထဲ ကို သဈ ရှကျ ခွောကျ ဖွဈ စေ…ကောကျ ရိုး ခွောကျ ဖွဈစေ ထညျ့ ပွီး မီး ရှို့ ပါ။ နှဈ ကွိမျ ပွု လုပျ ရနျ လို အပျ ပါ သညျ။ ပွာ ကြ ပွီး တာ နဲ့ တှငျး ထဲ ကို ရေ အ ပွညျ့ လောငျးပွီး တဈ ည ထား ပါ။
(၃) လ်ဘကျရညျဆိုငျတှမှော စှနျ့ပဈစုပုံထားကွတဲ့နှပျပွီးသားအခြိုခွောကျအဖတျတှကေိုယူနှားခြေးခွောကျနှငျ့ဆတူ ရောသမမှပွေီးတဈနလှေနျးပါ။ ပွီးလြှငျတှငျးထဲသို့ တဈထှာခနျ့ထပျဖွညျ့ပါ။ ၎င်းငျး အပျေါမှထပျမံ၍ မွဆှေေးအပွညျ့ထညျ့လိုကျပွီးပြိုးပငျကိုစိုကျပြိုးပါ။
မှတျခကျြ အဝါရောငျအသားရှိတဲ့သင်ျဘောသီးကိုအနီရောငျဖွဈစခေငျြရငျတော့ အောကျခွမှောဖွူးထားတဲ့ထုံးမှုနျ့ကိုမီးသှေးအမှုနျ့နဲ့ဆတူရောစပျပွီးစိုကျပါ။
crd-EFR Agro Venture Co., Ltd.
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိထားသင့်သော ဘုရားထဲမှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေ ထည့်သွင်းရခြင်း ( ဌာပနာ ) ရခြင်းအကြောင်းအရင်း …….